Global Voices teny Malagasy · 24 Jolay 2019
24 Jolay 2019
Tantara tamin'ny 24 Jolay 2019
"Niova ny ampahany tamin’ny fiainako hatramin’ny nidirako tato amin’ny vondrom-piarahamonina. Noho ny Global Voices no nahitako ny maha-zava-dehibe ny fahalalahana maneho hevitra, ny fizarana hevitra, izay nanosika sy nandrisika ahy hamorona ny bilaogiko amin’ny teny Frantsay sy Anglisy ary amin’ny teny Malagasy ; nahitako ny sila-panahiko." hoy Mamisoa Isabelle Raveloaritiana...
Tonian-dahatsoratra vaovao Ordò
Fantaro i Anas Saleem, Tonian-dahatsoratra vaovao Lingua amin'ny teny Ordò! Mpanao gazety mahaleotena sady bilaogera avy any Faisalabad, Pakistan i Anas.
Namely an'i Myanmar (Burma) tamin'ny fiandohan'ny volana Mey 2008 ny rivo-doza nahafatesana olona, izay niteraka aina nafoy marobe sy fahasimban'ny tontolo iainana.
Niteraka fahavoazana tao Azia Atsimo-Atsinanana ny El Niño
Misy fiantraikany ao amin'ny firenena maro any Azia Atsimo-atsinanana ny fiakaran'ny hafanana sy ny tsy fahampian-drano, noho ny tranga toetr'andro El Niño.
Matory na Maty: Fitantarana avy ao amin'ny rafi-pamonjana Syriana
Andian-tantara misy fizarana enina avy amin'ilay mpikatroka Sarmad Al Jilane mikasika ny zavatra niainany tamin'ny rafi-pamomnjana Syriana ny “Sleeping or Dead” (Matory na Maty) . Monina any Torkia ankehitriny, iray amin'ireo mpanorina sy mpandrindra ny ‘Raqqa Is Being Slaughtered Silently‘ (Vonoina amim-pahanginana ankehitriny i Raqqa) i Al Jilane, vondrona mpikatroka natsangana...
Ny fomba fahitana ny nahavoafidy indray an'i Obama tamin'ny ankapobeny (2012)
Ahoana no eritreritr'izao tontolo izao momba ny Filoha Barack Obama afaka efataona aty aoriana?